SAMOTALIS: DHAMBAAL TACSI AH OO UU DIRAYO MUSTASHAR AXMED CARWO, GEERIDA MARXUUM CISMAAN CABDILLAAHI CIGAAL (CISMAAN HINDI)
DHAMBAAL TACSI AH OO UU DIRAYO MUSTASHAR AXMED CARWO, GEERIDA MARXUUM CISMAAN CABDILLAAHI CIGAAL (CISMAAN HINDI)
Waxaan la wadaagayaa Tacsida shacab weynha Somaliland, geerida ku timid siyaasiga iyo ganacsadaha weyn ee Cismaan Cabdillaahi, Illaahay ha u naxariistee. Waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa ehelkii, waalid iyo wiilba, qaraabo, iyo guud ahaan bulshoweynta reer Maroodi Jeex oo uu ka soo jeeday iyo ehelkiisa jooga Maamul Degaanka Soomalida Itoobiya. Waxaan tacsi gaar ah u dirayaa xaaskiisa Marwo Hinda Cabdi Muuse.
Cismaan waxuu ahaa siyaasi hadal cad, meesha uu joogo ka muuqda, isagoo aanu muddo dheer wado ahayn kaadiriinta Kulmiye oo aan ku xusuusto mawqifyo adag iyo kaalintuu iska taagay. Waxuu ahaa ganacsade si weyn u shaqaysta dalkana maalgashi la yimid. Nin karti badan oo dedaal badan.